Chọpụta ụdị ụlọ mara mma maka ụlọ gị | Bezzia
Susana Garcia | 07/06/2021 20:00 | .Chọ Mma, Trendschọ mma nke ọma
El a na-enwekarị obi ụtọ n'oge a, ọ bụ nnukwu ngwakọta nke mpempe akwụkwọ na nke oge a, nke ochie na nke ugbu a. Esemokwu dị iche iche bụ oke aghụghọ iji chọọ mma, ebe ọ bụ na n'ụzọ a, anyị anaghị arapara naanị n'otu ụdị ma mepụta ihe pụrụ iche na ihe pụrụ iche. Ọ dị mma mgbe niile ịgwakọta ụdị dị iche iche wee nweta ụlọ nwere ụdị mmadụ karịa otu ụdị nke nwere ike ịgwụ ike.
El ustdị ndị mara mma bụ ụdị akwụkwọ ọhụụ na-achọ inye ya mmetụ mara mma na ọkaibe na gburugburu ebe. Typesdị gburugburu ndị a sitere n'ike mmụọ nsọ site na mba, oghere ndị dị egwu, ebe enwere ihe ndị na-adịghị mma na mpempe akwụkwọ na-arụ ọrụ, mana aka na-enyere ya aka imeziwanye ma mezuo ịdị mma ahụ na-enweghị mgbe ụfọdụ.
2 Ìhè na eke okike
3 Tinye okooko osisi na osisi
4 Furnituredị ngwá ụlọ French
5 Marble na seramiiki
na ihe ndi ozo bu ihe di nkpa nke uzo ndi mmadu, ya mere, anyị enweghị ike ime ma ọ bụrụ na ha. Osisi dị na arịa ụlọ, rattan, nkata wicker na ọbụna okwute okwute zuru oke iji mepụta ọnọdụ ikuku ahụ nke ị nwere ike mechaa tinye mgbatị ahụ. Rustic ga-abụrịrị onye na-akwado ya, ebe ọ bụ ụzọ bụ isi. Ngwongwo osisi na-abụkarị agadi ma ọ bụ nwee ọdịdị mara mma, nke siri ike na-enweghị ọtụtụ ihe ịchọ mma. A na-ejikwa osisi osisi ma ọ bụ okwute eme ihe. N'aka nke ọzọ, n'ọtụtụ ngwa ejiri wicker mee ihe, ya na nkata ma ọ bụ ihe mkpuchi n'ime ihe a mara mma nke mara mma.
Ìhè na eke okike
Na ụdị a, a metụ ọtụtụ ebe ọhụụ na gburugburu obodo. Igwe ọkụ na-enyere anyị aka belata aka ahụ dị nro, ebe ọ bụ na gburugburu oge gara aga nwere ọtụtụ osisi gbara ọchịchịrị na ụda siri ike na-agbanyụ ọnụ ụlọ. Na nke a, anyị na-achọ ndo dị ka ọcha, grays na ọkachasị beige nke dị nro, dị nro ma na-enyekwa ọkụ. N'ime ụdị gburugburu ebe a, ọ nweghị ezi uche dị na ịchọ mpempe ọtụtụ agba, n'ihi na gburugburu ebe izu ike adịghị adịkarị.
Tinye okooko osisi na osisi
Lo nwere rustic nwere ọtụtụ ihe ime ime obodo na agwa, ya mere ụfọdụ osisi enweghị ike ịfu na oghere ndị a. N'oge a, a na-ewere osisi n'ime ụlọ, nnukwu na obere osisi, iji mepụta nkuku pụrụ iche. Echiche bụ ịgbakwunye ụfọdụ ọhụụ na agba na osisi. Chọọ maka ọmarịcha ite na ndo ma ọ bụ tinye ite wicker.
Furnituredị ngwá ụlọ French
Ọ bụ ezie na anyị kwurula banyere isi ihe ndị na-eduga anyị na ụdị ịkpa ọchị, anyị ga-echekwa banyere ịgbakwunye ihe kachasị emetụ. Nwere ike maka nke a gụnyere ụfọdụ ngwá ụlọ na ụdị French. Styledị a na-egosipụta arịa ụlọ nke nwere ọtụtụ nkọwa, sinuous na ụkwụ a pịrị apị. Gbakwunye otu arịa ụlọ ma ọ bụ abụọ nke ụdị a karịrị ezu iji mepụta mmetụ dị mma. Tụkwasị na nke a, ụdị mkpụrụ vaịn bụ akụkụ nke mpempe akwụkwọ French ma yabụ anyị ga -emepụta ikuku pụrụ iche.
Marble na seramiiki
Ihe ndị dị ka ime ọhịa na-adịkarị njọ. Mana iji mepụta gburugburu ebe obibi mara mma karị anyị nwere ike itinye ụdị ihe ndị ọzọ. Na marble mara ezigbo mma ma ọ bụ ya mere eji ya na gburugburu ndị a. Ọ nwere ike ịbụ mpempe maka ekwú ọkụ, tebụl mabụl ma ọ bụ ọbụna metụ ya aka n’elu arịa ụlọ. Marble mara mma, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị ahọrọ agba dị ka isi awọ na ọcha. N'aka nke ọzọ, seramiiki nwekwara mmetụ ahụ dị mma, yabụ anyị nwere ike ịgụnye ya na obere nkọwa dịka vases ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ ịchọ mma. Na obere nkọwa ị nwere ike ịhụ ọkaibe aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Esi icho mma na ime obodo
Otu esi achịkwa nchegbu iji rie